ADWUI adda ta'uurraa gara tokkummaatti ni adeemaa laata? - BBC News Afaan Oromoo
ADWUI adda ta'uurraa gara tokkummaatti ni adeemaa laata?
Ministirri mummichaa Dr Abiy dhiheenya kana marii bakka bu'oota hawaasa Hararii, Beenshaangul gumuz, Afaarii fi Somaalee waliin taasisan irratti paartii biyyaaleessaa cimaa tokkoo hundeessuun barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru.
Ittaansuunis sirna lammiileen biyyatti hundi haala walqixa ta'e dubbatan, murteessan, sagalee itti kennanniifi keessatti fayyadama uumuuf yaali taasisaa jiraachu ministirri mummee dubataniiru.
Isaan boodeedha namoonni hedduunis kun dhuguma itti yaadamee moo ykn ministirri mummee jecha akka tasaa kan darbataniidha jechuun dhummicha mata duree marii kan taasifatan.
Waajjira Adda Dimokraatawa Tokkummaa Ummattoota Itoophiyaatti (ADWUI) tti itti gaafatamaa quunnamtiin alaa kan ta'an obbo Saadaat Nashan addichi paarti tokkoon ta'a jechuunsaa dhugaa ta'u BBC'tti himaniiru.
''ADWUI dhaabbilee siyaasaa biyyaalessaa afuriin hundeeffamuun akka paartii biyyaalessaa tokkootti tajaajilaa kan jiruudha,'' kan jedhan obbo Saadaat, paartileensi sagantaa walfakkaatu waan qabaniifu misooma, dimokraasii fi nageenya argamsiisuu irratti waliin hojjataa turaniiru. Ammas gara paartii biyyaalessaa tokkotti geedaramuus kan isaan dhorku hinjiraatu jedhaniiru.
ADWUIn Dr. Abiy Dura Taa'aa gochuun irra deebiin filate
Obbo Saadaat akka jedhaniittis, ADWUI dhaabbilee afran qofas osoo hintaane paartilee deeggartootaa kan biraas akka cimaniif jecha gara tokkummaatti yaa deemnu jechuun irra deddeebiin yaada dhiheessaa tureera. Keessatti yaa'ii 11ffaa dhaabbatummaa Addichaa irratti ADWUIn adda irraa gara paartiitti haa ce'ee gaaffiin jedhu dhiyaate, kanaafis kallattiin kennameefiiras jedhaniiru.
Paartiilee ADWUI keessatti hamatama garuu garaa garummaa yaada akka qabaatan hasaasuun jira. Kanaafuu dhuguma tokkomuun kun wayita kanatti dhugoomaa laata jechun gaaffii dhiyaateef, ''ADWUI keessatti hojimaati barame jira. Kanaafu paartileen hundeessanis yaadaafi mormiiwwan garaa garaa ni kaasu. Garuu addichi kana akka adda addummaatti hinilaalu,'' jedhaniiru.
Akka obbo Saadaati jedhanittis, adda addummaa irra mariiwwan kanneen keessatti yaadiiwwan sababbii qabaniif guddina sirna dimokiraasii fi biyyaaf bu'aa qabaatan ni ka'u jedhanii amanu.
Paartileen arfan yaadaan garaa garummaa qabaachunsaanii yaa dubbatamu malee, Addich garuu gamagama akkasii akka hinqabnee fi dhaabbatichi karaa hojii raawwachiiftuu isaa fi ajandaawwan caffee isaarratti yeroo itti garaa garuummaa adda bahan akka hinjirre himaniiru obbo Saadaati.
Kanaafuu paartii biyyaaleessaa tokko fiduudhaas dhimmi ni dhorka jedhamee yaadame akka hinjirrees jedhaniiru.
Paartiiwwan hundumtuu haaluma waliigaltee paartileen hundinu taasisaniin adeemaa jiraachu himanii, miseensoonni dhaabbichaas ummata marii keessatti hirmaachisuuf yaalaniiru. Kunis feedhii dhaabbilee hundaa kan jiduugala taasifateedhas jedhaniiru.
Yaadichi yoom kaa'ee? Eenyuun?
Akka Obbo Saadaat jedhanitti, yaadni kun kan guyyaa tokkotti umamee miti. kan yeroo dheeraaf dhaabbatichaa ilaalamaa tureedha.
Yaa'ii isaa 9ffa fi 10ffa dabalatee waltajiiwwan adda addaa irratti ka'aa turera. Garuu cimsamee kan irratti mar'atame yaa'ii idilee dhabbatummaa 11ffaarrattidhas jedhaniiru.
Maalii akka hanga ammaatti turamee yoo dubbatanis, gaaffiicha haala saayinsaawaa ta'een deebiisuuf yaaadamee akka ta'e Obbo Saadaati ni himu. Qorannoon kunis xumura bara kanaatti xumura argatee mariif ni dhiyaata jedhamee eegama.
''Paartiileen miseensaa hundinuu yaada kaasaniiru. Amma garuu haala jiruun paartilee afran qofa osoo hintaane dhaabbile gargaartootaa nutis itti eda'amu qabna gaaffii jedhu dhiyeeffachaa turaniiru,'' jedhaniiru.
Yaada tokkomu kana kaasuun wayita ammaa kanatti kaasuun maaf barbaachise gaaffii jedhuufis, dhimmichaaf sababii yeroo kennuu yoo dadhabameelleen garuu paartiileen siyaasaa jiraachuun barbachisaa akka hintaanefi walitti qabamuu irratti amanameera jedhanii obbo Saadaati. Walitti qabamuun kun ammo ADWUI qofaaf osoo hintaane paartilee mormitootaaleen kan fayyaduudhas jedhaniiru.
Kanaan alattis, ADWUI cime nama biyyattii ogganu akka qabaatuuf dandeettii cimfachuuf karoorfame akka tokommuun barbaachiseef sababii himaniiru Obbo Saadaati.
Haa ta'i malees biyyattiin daandii jijjiramaa irra ta'usheetiin walqabatee, wayita mmaan tan tibba Itoophiyaanummaan cimfamee leelifamaa jiru kanatti yaadni tokkomuu gara fuula duraatti dhufuunsaa kanneen tokko tokkoof yaadichi ijaarama sabaa fi federaaliziimii bu'ureeffate haaduu itti ta'aa jira jedhaniirus.
Paartiilee maqaa sabaatiin hundaa'an maqaansaanii waan sabasaanii bakka bu'uuf jecha ADWUI yaa tokkomu yoo jedhamu sodaan paartiileen eenyummaa sabaa ni dhabu jechuun itti humuunsaa hinollee.
Garuu ''Paartiilee hundinu akka kan gaheesaanii gumaatan taasisuuf yaadamee malee dhimmi ADWUI sirna federaalaa irratti umu kamiyyu hinjiraatu. Hojiisaa gara tokkootti fiduun alatti,'' jedhaniiru Obbo Saadaat.
Miseensi koree jiddugala Adda Bilisa baasaa Ummata Tigree (ABBUT) Dr Fisihaa Haafta Tsiyoon gama isaanitiin, ''osoo gara tokkoomuutti hindemamiin dura hojiwwan manaa hedduutu xumuramu qabaata,'' jedhaniiru.
Yoo xinnaate, ejjannoowwan paartichaa gurguddaa, heera motummaa fi haalawwan misaoomaa irratti walfakkaatu ta'u baatulleen yaada walitti dhiyaatu qabaachuun barbaachsaadha kan jedhan Dr Fisihaan, kana osoo hinguutiin adeemsi gara tokkomutti taasifamu fiixaan bahusaa amantaa hinqabu jedhaniiru.
Haala sirna heera motummaa ilaaluunis paartilee hunda jidduu waliigalteen akka hinjirre hundatu beekas jedhu.
''Miseensoon ADWUI fi miseensoonni ejjannoo walitti dhihenyaa qabu ykn walfakkaatu hinqaban. Yeroo garaa garaattis kan kaasan kanuma,'' jedhu.
Paartii Tokkoomuu irratti walii hingallee yoo jiraate hoo?
Ofii paartiin tokko okkoomu irratti yoo walii hingalle hoo? Maaltu umamu danda'a? Obbo Saadaat kanaaf deebii qabu:
"Tokkomuun paartii ta'udhaaf fedhii dhaabbilee miseensaa gaafata. Fedhiin bu'uuraa jira jenneeti amanna. Qorannichis kan mirkannneesse kanuma ture. Kun kan hinjirre yoo ta'u garuu gara paartiitti osoo hince'iin kan addicha keessaa bahu barbaadu bahu danda'a,'' jedhaniiru.